I-Turkish Airlines Dreamliner ye-New Generation Business Class; I-Boeing 787-9 enobude obude, amawele enjini nomzimba obanzi yaziwa nangokuthi i-Dreamliner. Okuqukethwe okuphezulu komswakama [Okuningi ...]
Imishini ye-X-ray, engasebenziseki ekungeneni kwezitimela zangaphansi e-Ankara, ibisebenza kusukela ngesonto eledlule. Ngesikhathi samahora aphakeme abagibeli nezimoto ezisebenza ngokusetshenziswa kwamadivaysi, izindlela zokuphepha emigwaqweni engaphansi [Okuningi ...]
UMongameli Recep Tayyip Erdogan, TUBITAK SAGE athuthukiswe ukuhlolwa kokudubula kokuqala okungabonakali kwe-Air-Air Missile Bozdogan okokuqala endizeni okuhlosiwe kuyo usuphumelele ukumemezela ngempumelelo. I-TAF izongena kwi-inventory Izindleko zezigidi zamaRandi kusuka ngaphandle [Okuningi ...]
Umenzi wezimoto zikagesi waseMelika uTesla wethule imodeli yakhe entsha yeloli eyi-Cybertruck Pickup ngesonto eledlule. Ukuqanjwa kwemoto, ingilazi yephukile ngesikhathi kwethulwa kwakuyi-ajenda yosuku lokuqala. Ngaphezu kwakho konke lokhu, [Okuningi ...]
Isikhumulo sezindiza i-Istanbul sihlelele ukwenza ibhizinisi ngenxa yenkungu, ebisebenza kahle ekuseni ngoLwesibili ngoLwesibili, izindiza zahlangana isikhathi eside emoyeni. Ngaphandle kokulibala, zonke izindiza zafika ngokuphepha esikhumulweni sezindiza. Isikhumulo sezindiza iHaber sicashunwe [Okuningi ...]
UNgqongqoshe u-Varank Izimpukane nge-First Domestic Hot Air Balloon; UNgqongqoshe Wezezimboni Nobuchwepheshe uMustafa Varank, uNevsehir wakhiqiza ibhaluni lokuqala lomoya elishisayo lasekhaya ladlula esibhakabhakeni saseCappadocia. Ungqongqoshe Varank, osebenza esifundeni [Okuningi ...]
Isithinteli Sokuphepha se-Weapon esingabhalisiwe esiteshini saseMamanevler Metro Station; Abantu ababili abebefuna ukugibela esitimeleni bephethe izibhamu nezinhlamvu ezingekho emthethweni bakhonjwe onogada esiteshini saseYamanevler. Abagibeli kwi-X-Ray [Okuningi ...]
Ukuhlukumezeka Ekuxhasweni Kwesakhiwo Sabasubathi beMetro Video
E-Istanbul, imigubho ye-29 Okthoba Republic Day onguthelawayeka onezingubo ezigobile, kwahlabelelwa i-Anthem Year Tenth. Ngenkathi izithombe zabiwe kwabezindaba zezenhlalo, lesi senzo sahunyushwa ngokuthi "siphazamisa i-tarafından ngamaSulumane kanye nokuphendula [Okuningi ...]
Ukuhlukunyezwa e-Istanbul Metro Ukusabela Okukhulu Kuzo Zonke Izigaba!
Ividiyo eqoshwe ngo-Okthoba e-Istanbul Metro 29 idonsele ukusabela okukhulu. I-10 esitimeleni esingaphansi komhlaba. Isakhamuzi esinesigqoko esiseduze kwezakhamizi ezihlabelela iNgoma Yonyaka ngegama [Okuningi ...]